Mashandisiro anoita Symbiosis yeKutsika neDhijitari Maitiro Ekutenga Kwatinoita Zvinhu | Martech Zone
Mashandisiro anoita Symbiosis yeKutsika neDhijitari Maitiro Ekutenga Kwatinoita Zvinhu
Svondo, Kukadzi 28, 2021 Svondo, Kukadzi 28, 2021 Diogo Voz
Iyo indasitiri yekushambadzira yakabatana zvakanyanya nehunhu hwevanhu, maitiro, uye kudyidzana zvinoreva kutevera shanduko yedhijitari yatakawana mumakore makumi maviri nemashanu apfuura. Kuti isu tirambe tichipinda, masangano apindura shanduko iyi nekuita madhijitari uye magariro enhau nzira dzekutaurirana chinhu chakakosha muzvirongwa zvavo zvekushambadzira zvebhizinesi, asi zvinoita sekunge nzira dzechinyakare dzakasiiwa.
Tsika dzekutengesa dzechinyakare dzakadai semabhiribhodhi, mapepanhau, magazini, tv, redhiyo, kana mapepa ari padivi digital advertising uye nhepfenyuro yemagariro enhau anoshanda pamwe chete anobatsira kuvaka zvirinani ruzivo, zvinoreva, kuvimbika, uye pakupedzisira kukurudzira vatengi padanho rega rekuita kwavo sarudzo.
Zviri kuchinja sei nzira yatinotenga nayo zvinhu? Ngatizvipfuurei izvozvi.
Nhasi, chikamu chakakura chehupenyu hwedu chinoitika mudigital nzvimbo. Iwo manhamba akajeka:
Pazuva rekupedzisira ra2020, pakanga paine 4.9 bhiriyoni vashandisi veinternet uye 4.2 bhiriyoni anoshanda maakaunzi pasocial media network pasirese.
Kutanga Saiti Gwara
Sezvo musika wepamhepo pawakakura, saizvozvowo makambani nzira dzekutengesa. Shanduko yedhijitari yakaita kuti zvikwanisike kuti mabhenji abate nekukurumidza uye zvakanyanya kunanga nevatengi, pamwe nekupindirana kuenzanisa zvigadzirwa nemitengo, tsvaga mazano, tevera vanogadzira mazano, uye vatenge zvinhu.
Maitiro atinotenga anopomera kusarudzika kwekushandisa kweinternet uye tame yemidziyo inobatwa nemaoko, sekudyidzana nekutengeserana kwevanhu, kuita sarudzo, nekutenga zviri nyore kupfuura nakare kose.
Musika Mutsva, Kushambadzira Idzva?
Hongu, asi ngatijekesei.
Maitiro anoshanda ekushambadzira, echinyakare uye edhijitari, anoratidza kuziva zvinodiwa nenharaunda, kugadzira zvipo zvakakosha zvinogutsa izvo zvido, uye nekutaurirana zvinobudirira nenhengo dzadzo kuwedzera kugutsikana. Kunyangwe nharaunda dzekuvepo pamhepo zvisingaite kuramba, dhijitari haisi iyo-yese uye yekupedzisira-yese yekushambadzira.
Kana iwe usingatendi kwandiri, tora Pepsi Refresh Project semuenzaniso. Muna 2010, Pepsi-Cola akafunga kusiya kushambadzira kwakajairika (kureva kushambadza kweterevhizheni kwegore rose kweSupp Bowl) kuti atange mushandirapamwe wedigital, kuyedza kuvaka ruzivo nekukudziridza hukama hwakareba nevatengi. Pepsi akazivisa kuti vaizopa madhora makumi maviri emadhora kumasangano nevanhuwo zvavo vaive nemazano ekuti nyika ive nzvimbo iri nani, vachisarudza yakanakira veruzhinji kuvhota.
Panyaya yekubatanidzwa, kwavo kwaive kurova! Vanopfuura mamirioni makumi masere emavhoti akanyoreswa, Peji yaFepsi Facebook yakawana anenge 3.5 miriyoni likes, uye Pepsi's Twitter nhoroondo akagamuchira vanopfuura makumi matanhatu evateveri, asi iwe unogona kufungidzira chii chakaitika pakutengesa?
Mucherechedzo wacho wakarasikirwa nehafu yenguva yemadhora mumari, wakadonha kubva pachinzvimbo chayo chetsika sechinwiwa chinwiwa chechipiri muAmerica kusvika panhamba nhatu, kuseri kweDiet Coke.
Mune ino kesi chaiyo, vezvenhau vega vega vakagonesa Pepsi kusangana nevatengi, kuvandudza kuziva, kukanganisa mafungiro evatengi, kugamuchira mhinduro, asi haina kuwedzera kutengesa izvo zvakamanikidza kambani kutora, zvakare, zano remagero mazhinji raisanganisira echinyakare. nzira dzekutengesa. Nei izvozvo zvingave zvakadaro?
Dhijitari uye Chinyakare Ruoko Ruoko
Chinyakare nhepfenyuro haina kutyorwa. Izvo zvinoda kugadziriswa shanduko yemafungiro ezvemashandiro enhau enhau anoshandiswa kuve uye kuti ibasa ripi nhasi.
Charlie DeNatale, Pamusoro peFold's Chinyakare Media Strategist
Ini ndinofungidzira izvi hazvingagone kuve zvechokwadi, zvikasadaro, nei tichiri kuona McDonald ari panze?
Kunyangwe isu tichiidaidza kuti yechinyakare, kushambadzira kwakajairika kwakashanduka zvakanyanya kubva panguva yegoridhe redhiyo nemapepanhau, tichifunga izvozvi basa rakanyatsojeka. Inobatsira kunongedza nhengo dzakasiyana dzemhuri, kusvika kune vamwe vateereri kuburikidza nemagazini akasarudzika, zvirongwa zvepaTV, nemapepanhau, zvinobatsira mukugadzira pfungwa yekusimba, kutendeseka, uye kujairika kwechiratidzo, uye kuvaka mamiriro anodiwa akatenderedza se tsime.
Sezvo dhijitari inoratidza kuti yakakosha kuti mabhenji arambe achienderana nemusika unogara uchichinja, chinyakare chingave chombo chekurwisa vanhu kugara vachipfupisa nguva yekutarisisa, ichigonesa kuita kwakanyanya, sezvo makatalog emwedzi nemwedzi ari muenzaniso we. Nepo vamwe vangangoda munhu anokonzeresa kuti vatarise zvavanotenga, vamwe vangangoti kuvimbika kuchinyorwa chepepanhau.
Kana uchishanda mushe, madhijitari uye echinyakare kushambadzira masvikiro anounganidza mativi ese emutengi spectrum, achisvika kune vakawanda vanogona vatengi izvo zvinogona kutungamira kune yakafanana uye yakazvimiririra mashandiro ekuwedzera mari. Kuongorora imwe neiyi kunowedzera mukana wekuchengeta vateereri mukati me "bhuru redziviriro" rechiratidzo uye zvinokanganisa nzira yesarudzo yemutengi.
Dhijitari nemagariro zviripo padhuze neturusi maturusi ari kuumba zvakanyanya matengero atinotenga, kusundira vanhu kuenda kunotenga pamhepo, asi mhinduro yeshanduko iyi inzira dzekushambadzira dzakasiyana-siyana, kusanganisira masvikiro echinyakare ari kukanganisa maitiro ese ekutsvaga. Kutaurirana kuburikidza nenzira dzakasiyana, makambani anovimbisa zvakanyanya-kuoma-kutiza bubble rerudziro izvo zvinogona kuburitsa chinokanganisa pane chero nhanho yerwendo rwevatengi kubva pakumutswa kwechishuwo kune iyo post-kutenga.
Tags: kumusoro kwedangaCharlie denataledigital advertisingpepsipepsi yekuzorodza chirongwaSocial Media Marketingkushambadzira kwetsika
Diogo anozvimiririra edhijitari anomaka uyo anoda kutengesa ruzivo nevanhu vari muindasitiri. Kana iwe ukasamuwana achiverenga nezvechazvino kushambadzira maitiro, iwe pamwe uchamuwana achiteerera podcast kana achishanda pamapurani ekugadzira.
Dhijitari Kushambadzira Kupi Kudyisa Kwako Kwekutengesa Chitoro
Maitiro Ekukwiridzira Kwangu Akaratidzwa Mifananidzo Yemagariro Midhiya Uye Kuwedzera Yemagariro Traffic ne30.9%